राजा महोत्सव ओडिशा Sandpebblestours संग - कल + 91-993-702-7574
राजा महोत्सव ओडिशा
ओडिशालाई आफ्नो यात्रा योजना त्यसपछि, साँचो महोत्सवमा राज्य हेर्नको लागि आदर्श अवसर राजा महोत्सव ओडिशामा स्वागत छ।
"राजा" - यो जस्तो जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ; आफ्नो दिमाग को धेरै परेशान मत करो !!! त्यो उत्सव अवसर नृत्य, गायन, भोजनको किस्म, र परम्पराको नाजुक सन्तुलन प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा काम गर्ने स्मारकबार्डको परिणाम हो। निश्चित रूपमा, यो छुट्टीको अनुभव हो अर्को स्तरमा लिइएको छ।
केक मा आईसिङ, बालुवाटार भ्रमण टुर यात्रा त्यो त्यो उत्सवमा प्रसन्नता थप्नको लागि रोमाञ्चक संकुल प्रदान गर्दछ "राजा"। और, राज्य को विभिन्न भागहरु लाई यात्रा भन्दा राम्रो तरीका हुन सक्छ कि तपाईंको प्रियजन संग उत्सव रहन को लागी हो?
उत्सव आत्मा उच्च राख्न, यो समय बालुवाटार भ्रमण टुर यात्रा सम्म प्रस्ताव 20% छूट बुकिङमा, एक आनन्दित रहनको लागि र 60 भन्दा धेरै ब्रांडेड लक्जरी वाहनहरूसँग सबै यात्राको साथ यात्रा। चाहे तपाईंलाई एक Sedan, एसयूवी, वा उच्च-अन्त्य लक्जरी कार चाहिन्छ, तपाईले केवल क्लिकमा आफ्नो छनोटको सवारी खोज्न निश्चित हुनुहुन्छ।
ओडिशालाई आफ्नो यात्रा बुक गर्नुहोस् रेत पिब्बल्स भ्रमण र जीवनकाल को लागि तपाईं खुशी हुनेछ कि सम्झनाहरूको घर सम्पत्ति लिनुहोस्। कल: + 91-993.702.7574.